भोजपुरबासीको प्रश्न, ‘गृहमन्त्री ज्यू, आठ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र काम गर्नेलाई कारवाही हुँदैन ?’ - Koshi Online
भोजपुरबासीको प्रश्न, ‘गृहमन्त्री ज्यू, आठ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र काम गर्नेलाई कारवाही हुँदैन ?’
संखुवासभा, साउन २४, २०६७ असार २५ गते भोजपुरबासी निकै खुशी थिए । अझ षडानन्द नगरपालिकाबासीको त खुशीको सीमा नै थिएन । किनकी सोही दिन संखुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदिको लम्सुवा घाटमा मोटरेवल पुल निमार्णको लागि सम्झौता भयो । अझ सम्भौता भएको दिन त भोजपुरमा दीपावली नै गरियो । अनि भोजपुरबासीले सोचेका दिए अब दुःखका दिन गए । पुल नहुदाँ अरुण नदिमा ढुङ्गाबाट जोखिम मोलेर तर्नुपर्ने दिन गए भन्ने आश पलाएको थियो ।
तर, २०७० असार २५ मा भने षडानन्दबासीको आश पुनः हरायो । उनीहरुको खुशी एकाएक निराशामा परिणत भयो । किनकी २०७० असार २५ गतेसम्ममा सो पुल निमार्णको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्पन्न हुन नसकी पुन २०७४ असार २४ गतेसम्म समय थप गरियो ।
पुलको जग खन्ने क्रममा चट्टान भेटिएको भन्दै ठेकेदारले काम छाडेपछि डिजाइन परिवर्तन पनि गरिएको थियो । स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले २०७० असार २५ सम्ममा काम सक्नुपर्ने भए पनि समय थपिमागेको थियो । २०७४ असार २४ सम्म थप समय दिइए पनि हालसम्म कामको प्रगती भने ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
त्यसपछि भने म्याद थप नगरी निर्माण कम्पनीले गत असार पहिलो सातासम्म काम गरिरहेको थियो । पिलरका लागि प्रयोग हुने ‘वेल फाउन्डेसन’लाई आवश्यक गहिराइ र्पुयाउनका लागि चट्टानले अवरोध गरेकाले यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकिने कम्पनीका साइट इन्चार्ज विजय लामिछानेले बताए । पुनः डिजाइन परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बढी ब्लास्टिङ गर्दा वेल फाउन्डेसन कमजोर हुन्छ । त्यसकारण डिजाइन परिवर्तनपछि मात्र पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिनेछ ।’, उनले भने ।
अहिलेको डिजाइनअनुसार चारवटा पिलर १६ मिटर गहिराइसम्म गाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधा भागदेखि नै चट्टान भेटिएको र त्यसलाई ब्लास्टिङ गर्दा पनि फुटाउन नसकिएकाले डिजाइन परिवर्तन प्रक्रियामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारका इन्जिनियर सुरजहरि अधिकारीको भनाइ छ । ‘पुल रिभ्युको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसपछि मात्र कुन प्रक्रियाबाट पुल बन्ने भन्ने टुंगो लाग्छ’, उनले भने । इन्जिरियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक क्याम्पसबाट विज्ञको टोली आएर स्थलगत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
समयमा पुल नबन्दा भोजपुरका षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका नागिरक समस्यामा परेका छन् । हिउँदमा लम्सुवाबाट जोखिपूर्ण रूपमा डुंगामा आवतजावत गर्नुका साथै महँगोमा सामान ढुवानी गर्नुपर्ने उनिहरुको बाध्यता रहेको छ । नदीमा बाढी आए झोलुंगे पुलमार्फत बोकेर दैनिक उपभोग्य सामान तथा निर्माण सामग्री लैजाने गरेका छन् । झोलुंगेबाटै जोखिम मोलेर मोटरसाइकल समेत तार्ने गरिएको छ ।
१ सय ५७ मिटर लम्बाइको पुल १३ करोड ५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । थप डिजाइनपछि निर्माण खर्च १६ करोड ६३ लाख र्पुयाइएको छ । दुई प्रकारको डिजाइन रहेको यो पुलको ७७ मिटर स्टिल ट्रस्ट र ८० मिटर आरसीसी ढलान हुनुपर्नेछ । थप डिजाइनमा पुलको लम्बाइ २ सय ४७ मिटरको बन्ने भएपनि थप ९० मिटरको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । पुलको विकल्पका रूपमा कात्तिके घाटमा सडक डिभिजनले फेरि निर्माणका लागि मना कन्स्ट्रक्सन तनुहँलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । मनाले काम सुरु नै नगरी २०७३ मै अवधि सकिएको थियो । निर्माण कम्पनीले भने पुनः डिजाइनपछि मात्र थप काम गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
यसरी पटक–पटक पुल निमार्णको समय थपिएको र समयमा नै निमार्ण सम्पन्न नभएकोले षडानन्दबासिको सपना भने निराशामा परिणत भएको छ । उनीहरुले हामा दुःखका दिन कहिल्यै नजाने रहेछ भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । अझ उनीहरुले पुल निर्माण समयमा सम्पन्न नभएको र पटक–पटक म्याद थपेर आठ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएकोप्रति षडानन्दबासीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् । गृहमन्त्री ज्यू, खोई तपाईको ठेकेदार कारवाही प्रक्रिया ? आठ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम गर्नेलाई कारवाही हुँदैन ? कि तपाईका आखाँ ग्रामिण भेगसम्म पुग्न सकेका छैनन् ? उनीहरु भन्छन् , गृहमन्त्रि ज्यू, ! काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरेर पुल बनाउन अर्को ठेकेदार पठाउनुस र हामीलाई सास्ती पाउनबाट बचाउनु होस् ।
‘लभ स्टेशन’को पहिलो गीत सार्वजनिक, प्रदीप र जसिताले यसरी गरे रोमान्स (भिडियोसहित)
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ११:५५